Alaysa minnaa niman ragoo caaqiliin ah? - Maqaal - Horseed Media
Qore: Xaashi Y. Cismaan
Kuwo ku raaxaysanaya keliya AWOOWEYAASHEEN baa wax ahaan jiray!
Kuwo ku raaxaysanaya in nimankii awal yasi jiray amaba liidi jiray, ay maanta dhooqada ku wada jiraan!
Kuwo garashadii iyo caqligii ka kaaftoomay oo ay ka soo hartay “Ninkii Caddaa, ama ninkii Carabka ahaa, wuxuu yiri, ama lahaa”!
Kuwo ku hamminaya in kuwa halka lug kula jira dhooqada, labada lugoodba loogu geliyo!
Kuwo qurbaha ku kala nool oo horay uga soo cararay dhibtii iyo gabood-falladii loo soo gaystay oo hadda ku raaxaysanayaa in kuwii dhibta usoo gaystay ay dhooqada ku dhex jiraan!
Kuwo, intaa falanqaynaya, kana doodaya dhooqada ay ku dhex jiraan oo camalba ka dhigtay ‘waraysiyo bixin, Twitterayn, live-soo-gelid iyo soo saaaridda maqaallo ku qoran afaf qalaad’!
Kuwa, wanaag iyo run kastoo loo sheego ku CARIIQSANAYA, oo aan la soo marin karin, inay oggolaadaan wanaag, khayr ama XAL kastoo ka soo maaxday maskax kaloo aysan isku ROOXAAN (i.e. Beel) ahayn.
(Si hufan ugu dar haddaan qaybo kale illoobay)
Nin yaabban hadalkii baad kuhadashay, ogowse in badan baa haday hadasho kula dhawaaq noqon lahayd.
Say u indhaxuntahay uma alla la’a.
exactly caqliga aan Somalia ku soo arkay 2 bilood ka hor, New Generation ayaa soo kacay intii xoogooda iyo caqligooda looga faa idi lahaa rag 30 sano qurbo jiray ayaa askar ka dhigtay oo isku baa bi’inayo.
Walaal waad ku mahadsan tahay qoraalkaaga SOOMAALINIMO!
Nassib Wanaag, Caqligii Soomaaligu waa gartay inaan dhib danbe dhex marin dadka Soomaaliyeed oo cidna maqlimayso in dib loo noqdo!
REER GURI BIYAHOODAY CABIN!
CEELEYNA WAYSKA HESHIIS!
HORAA LOO SOCONAYAA,
RABINA TALO KU FILAN!